Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး)
Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) ကဘာလဲ။
လေပြွန်ရောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကလေးများတွင် အဓိက ဖြစ်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှု တစ် မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရောဂါသည် အသံအိုးနှင့် အဆုတ်တွင်း သို့ ဝင်သွားသော လေပြွန်ကို ယားယံစေပြီး ရောင်စေ ပါသည်။ ပြင်းထန်စွာ ချောင်းဆိုးခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေပါ သည်။
ကြာရှည်စွာ လေပြွန်ရောင်ပါက အဆုတ်ရောင် ရောဂါ သို့မဟုတ် အဆုတ်တွင် ပြင်းထန်သော ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လေပြွန်ရောင်ခြင်းသည် အဖြစ်များပါသည်။ အသက် ၆ လနှင့် ၃နှစ်ကြား ကလေးငယ်များတွင် အများအားဖြင့် ဖြစ် ပွားပါသည်။ အသက် ၁နှစ် အရွယ်တွင် အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ် ပါသည်။ သို့သော်လည်း လေပြွန်ရောင်ခြင်းသည် အသက် ၃ လ မျှရှိသော ကလေးငယ်များတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ် ပွားနိုင်ပြီး အသက် ၁၅နှစ် အရွယ် ကလေးများအထိ ဖြစ်ပွား နိုင်ပါသည်။
အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချ ခြင်းဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လေပြွန်ရောင်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော ရောဂါလက္ခဏာ များမှာ ပင်လယ်ဖျံအော်သံကဲ့သို့ မြည်အောင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း နှင့် အဖျားတက်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား ရောဂါလက္ခဏာ များမှာ လည်ချောင်းနာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ အပြင် ကလေးငယ်များတွင် အသက်ကွဲခြင်း၊ အသက်ရှူမြန် ခြင်း၊ အဆုတ်တွင်းသို့ လေရှူသွင်းလိုက်သောအခါ လေသံ ပြင်းပြင်း ကြားရခြင်း တို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုလက္ခဏာ များသည် လဲလျောင်းသော အခါ ပို၍ ဆိုးရွားလာပါသည်။ ရောဂါ လက္ခဏာ များသည် ညဘက်တွင် ပိုဆိုးတက်ပါသည်။
အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ် ပြုလုပ်ရာတွင် ဆူညံသော အသက်ရှူသံ ကျယ်ကျယ် ထွက်ခြင်း
သွားရည်ယိုခြင်း၊ မျိုချရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ စိတ်လက်မာန်ပါ ဖြစ်ခြင်း
နှာခေါင်း၊ ပါးစပ် နှင့် လက်သည်းခွံ ပတ်လည်တွင် အပြာရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင် အရေပြားဖြစ်ခြင်း
Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လေပြွန်ရောင်ခြင်းသည် parainfluenza RSV, measles, adenovirus, influenza စသော ဗိုင်းရပ်စ်များ ကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ သင့်ကလေးသည် လေထဲသို့ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်းမှ ပျံ့နှံ့သွားသော ရောဂါပိုးရှိ သော အမှုန်များကို ရှူမိခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါ သည်။
ထိုအမှုန်များရှိ ဗိုင်းရပ် သည် အရုပ်များနှင့် အခြား မျက်နှာပြင်များတွင် ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေးသည် ရောဂါပိုးရှိသော မျက်နှာပြင်ကို ထိတွေ့ပြီး သူ၏ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်ကို ထိပါက ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါသည်။ လေပြွန်ရောင်ခြင်း သည် ဓါတ်မတည့်မှုများ၊ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို ယားယံစေသော အရာကို ရှူသွင်းမိခြင်း နှင့် အက်စစ်ပြန်စီးခြင်း တို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လေပြွန်ရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက် များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ-
လေပြွန်ရောင်ခြင်း အဖြစ်နိုင်ဆုံးမှာ အသက် ၆လနှင့် ၃နှစ်ကြား ကလေးများတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပွားနိုင်မှုမှာ အသက် ၁၈-၂၄ လ တွင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ခံအားမကောင်းသော ကလေးများ၊ မိဘတွင် ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသော ကလေးများသည် ရောဂါ ရနိုင်ချေ မြင့်ပါသည်။
Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းနှင့် ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးခြင်း တို့ဖြင့် ရောဂါအဖြေရှာ နိုင်ပါသည်။ ကလေး၏ လည်ပင်းနှင့် အဆုတ်အား ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဓါတ် မှန်သည် လည်ပင်းရောင်ခြင်းနှင့် လေပြွန်တွင် သွေး သို့မဟုတ် ပြည် တစ်ခုခု ဖြင့် ပိတ်ဆို့နေသလားကို ပြသနိုင် ပါသည်။ ဆရာဝန်က ရောဂါပိုးကူးစက်မှုသည် ဘတ်တီးရီး ယားကြောင့်ဟု သံသယရှိပါက သွေးစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။
Croup (ထူးခြားကျယ်လောင်သောချောင်းဆိုးသံကို ဖြစ်စေသည့် လေပြွန်ရောင်ခြင်းတစ်မျိုး) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လေပြွန်ရောင်ခြင်း အများစုသည် အိမ်တွင် ဘေးကင်းစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေးသည် ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ကို ကာကွယ်ရန် အရည်များများ သောက်သင့်ပါသည်။ သင့် ကလေး၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် သုံးရက်မှ ငါးရက် ထက်ပို၍ ရှိနေပါက သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာပါက လေပြွန် အတွင်း ရောင်ရမ်းမှုများ သက်သာစေရန် ဆရာဝန်သည် စတီးရွိုက်တစ်မျိုး (Glucocorticoid) သောက်ရန်ညွှန်ကြား ပါလိမ့်မည်။
သင့်ကလေးသည် အသက်ရှူရန် ပြဿနာ ရှိပါ က ဆေးရုံတက် ကုသမှု ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ adrenaline ထိုးခြင်း၊ အောက်စီဂျင် အစွပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေးကို မကြာခဏ လက်ဆေးရန် သွန်သင် ပါ။ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ရပ်တန့်ရန် အကောင်းဆုံး နည်းဖြစ်သည်။
သင့်ကလေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်း ဆေးသောက်စေပါ။
Croup. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000959.htm. Accessed July 13,2016.
Tests and diagnosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/croup/basics/tests-diagnosis/con-20014673. Accessed July 13, 2016.Croup. http://kidshealth.org/parent/infections/bacterial_viral/croup.html. Accessed July 13, 2016.